Maxaad ka ogtahay ballanqaadka uu taliyaha cusub ee booliska Soomaaliyeed u sameeyay Shacabka reer Muqdisho? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaad ka ogtahay ballanqaadka uu taliyaha cusub ee booliska Soomaaliyeed u sameeyay...
Maxaad ka ogtahay ballanqaadka uu taliyaha cusub ee booliska Soomaaliyeed u sameeyay Shacabka reer Muqdisho?
Muqdisho (Halqaran.com) – Taliyaha cusub ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Cabdi Xasan Xijaar ayaa ballanqaaday in ay furi doonaan Waddooyinka xiran ee Caasimadda Muqdisho .
Taliye Xijaar ayaa sheegay in ay qaadi doonaan dhagaxaanta waa weyn ee lagu xiray Wadooyinka , islamarkaana Ciidanka Booliska ay Mas’uuliyad iska saari doonaan.
Wuxuu xusay, in maamulka gobolka Banaadir ay la kaashan doonaan furitaanka Waddooyinka si loo xoojiyo wada shaqeynta Ciidanka Booliska iyo maamulka gobolka Banaadir.
Dhanka kale, Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar maxamuud Maxamed Cumar Finish oo ka qayb galayay munaasabadda xil Wareejinta taliyaha Ciidanka Booliska ayaa waxa u ka codsaday Taliska Ciidanka booliska in ay furaan wadooyinka.
Sidoo kale, wuxuu shacabka ka dalbaday in ay la shaqeeyaan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Taliyaha cusub ee booliska Soomaaliyeed